Ifulethi enomphefumlo ePärnu Old Town
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguGrete
Indawo entsha yokulala enegumbi elinye (35m2) kwisakhiwo esiyimbali sika-1900 ePärnu Old Town. Kanye nje emva kokuba uphumile, ukwisitrato esiphilayo esineendawo zokutyela ezidumileyo kunye neekhefi. Yonke into ikumgama wokuhamba.
Ngebhedi (140cm) kunye nebhedi ye-sofa (140cm), le ndlu ihlalisa ukuya kuthi ga kwi-4 abantu - ilungele iintsapho, izibini kunye nabahlobo aba-2 ababelana ngokuhlala. I-wifi ekhawulezayo kunye neTV iyafumaneka. Ikhitshi elixhotyiswe kakuhle kunye negumbi lokuhlambela elitsha kraca elineshawa.
Kwiflethi kukho umxube omdala kunye nomtsha - isakhiwo sembali esinesilingi eziphezulu, umgangatho we-oki kunye neenkcukacha zokuhombisa ezikukhumbuza ukuba kwiDolophu endala. Nangona kunjalo zonke izibonelelo ozifunayo ukuze uzive ukhululekile (ikhitshi, igumbi lokuhlambela, igumbi lokulala) zintsha kwaye zikumgangatho wale mihla.
Ikhitshi libandakanya i-oveni, isitovu esincinci sokuqhelanisa, ifriji, izinto zokupheka kunye nezinto eziyimfuneko zokupheka (ityuwa, iswekile, i-oyile). Igumbi lokuhlambela lineshawa kunye nomatshini wokuhlamba.
Ibhedi kunye nebhedi ye-sofa yi-140 cm kwaye ikhululekile.
Kukho indawo engasemva efana nesithuba, esahlulwe lisango kwisitrato esikhulu. Ayiloncedo ngenene ekuphumleni, kodwa ilungile ngokwaneleyo ukuba ingalalisa umntwana kwistroller kwaye ugcine iliso kwifestile.
Idolophu endala yeyona ndawo iphilayo yasePärnu. Kwisitrato esinye okanye kufutshane uneendawo ezininzi zokutyela ezidumileyo, iikhefi kunye neeresityu, iibhari kunye neeklabhu. Nje ukuba uphume kumnyango wendlu, uphakathi kwimvakalelo yeholide yasePärnu. Ulwandle luhamba imizuzu eyi-10. IDolophu eNdala nayo inokuxakeka ngakumbi ngorhatya, ngoko ke kukho ingxolo yesitrato, ngakumbi ngeempelaveki.
Umbuki zindwendwe ngu- Grete
Sifuna ukuba iindwendwe zethu zikhululeke kwaye zonwabe ngexesha lokuhlala kwazo kwaye sinethemba lokuba silungiselele yonke into ukuze bangadingi nto kwaye banokonwabela iholide yabo ngokuzimeleyo. Izitshixo sinikezela, kodwa zinokushiywa ngokulula. Ukuba kukho iingxaki, sinokufikelela ngefowuni okanye nge-imeyile. Sithetha isiNgesi, isiFinnish kunye nesi-Estonian.
Sifuna ukuba iindwendwe zethu zikhululeke kwaye zonwabe ngexesha lokuhlala kwazo kwaye sinethemba lokuba silungiselele yonke into ukuze bangadingi nto kwaye banokonwabela iholide y…